तपाईलाई गोरो हुने मन छ ? घरेलु ३ सरल र अदभुत उपायहरु जसले तपाइको अनुहारनै परिवर्तन गरिदिन्छ – mero sathi tv
On ५ चैत्र २०७४, सोमबार १३:२६
टिभी, पत्रिका अनि रेडियोमा हामीले धेरैजसो गोरो र चम्किलो छालाका लागि आएका कसमेटिक्स सामानहरुका विज्ञाजन देख्दै अनि पढदै सुन्दै आएका छौ । के सुन्दरता त्यती महँगो छ त ?परापुर्वकालमा अदभुत सुन्दरिहरु यी व्यवसाहीक अनि प्रशोधीत उत्पादन बिनानै के कारणले त्यति सुन्दर थिए त ?
बास्तवमै प्रकृतीमा धेरै कुराहरु लुकेको छ अनि प्राकृतीक कुराहरुको उपयोग गर्नाले हामी सजिलै स्वस्थ र सुन्दर बन्न सक्दछौ । आउनुहोस आज हामी तपाईको सुन्दरताका लागि केही घरेलु गोरोपनाका अचुक उपायहरु राख्न चाहन्छौ ।
फेरि सुन्दरता र गोरोपनालाई केवल नारीसौन्दर्य सँग मात्र हेरिनु पनि हुँदैन् है । आखिर पुरुषहरुलाई पनि राम्रो देखिन र स्वस्थ रहन त्यतीनै जरुरी छ जति नारीलाई छ । आउनुहोस एउटा औसत नेपाली भान्सामा बनाउन सकिने घरेलु सुन्दरताका विधीहरु प्रस्तुत गर्दछौ, नियमीत यपयोग गरिएमा फरक आँफै देख्न सकिन्छ ।
अनुहारमा लगाउने लेप बनाउने सहज विधीहरु
१ः लगभग संसारभरि अनि नेपालमा पनि सबैतिर पाईने फलफुल मध्य एउटा हो काँक्रो । काँक्रोको स्वस्थ अनि सौन्दर्यका हिसाबले प्राचीनकालदेखि नै महत्वपूर्ण उपयोग हुँदै आएको छ । आउनुहोस् यसै काँक्रोको उपयोग गरेर अनुहारमा लगाउने सरल लेप बनाउने गोप्य विधीको चर्चा गर्दछौ ।
सर्वप्रथम हरियो काँक्रोका केही टुक्राहरुलाई मिक्सचरमा राखेर ग्राईन्ड गर्नुहोस् अनि त्यो झोलमा केही मात्रामा दुध हाल्नुहोस् । यसरी दुध र काँक्रोको लेपनलाई दिनँहु बनाएर अनुहारमा लेप लगाउने गरेमा अनुहारको छालाको कालो र मरेका तन्तुहरु हटाउने, कोमल बनाँउने, अक्सिजीनेट गर्ने र छालालाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउने प्रमाणीत तथ्यहरु हुन् ।
२ः अब अर्को सरल विधीको चर्चा गर्न चाहयौ । यसका लागि केवल एउटा कागति, केही नुन र हर्दि अर्थात धुलो बेसार चाहिन्छ । सामान्यतया नेपाली भान्सनहरुमा यी कुराहरु दिनँहु हुनेगर्दछन् ।
कागतिलाई दुईटा बरावर भागमा काटेपछि काटिएको भागमा केही चिम्टी नुन र हर्दिको धुलो हालेर कागतीलाई सुस्तरि निचोर्दै अनुहारमा दल्न पर्दछ ।
यसरी नियमित यो लेप लगाउने गरेमा पत्याउन नसकिने गोरोपना र मुलायम अनुहार हुने उल्लेख गरिएको छ । सबैभन्दा गज्जबको कुरा त के छ भने यस्ता घरेलु विधीहरुको प्रयोगले कुनै साईड एफेक्ट गर्दैन ।
दुई या तिन मिनेटसम्म अनुहारमा कागतिले मसाज गर्नुहोला, आँखावाट भने जोगाउनुहोला यो लेपलाई । यसरी लेप लगाएको २० देखि २५ मिनेटसम्म राखेपछि राम्ररी अनुहार सफा पानीले धुनुपर्नेछ ।
३ः नुनको प्रयोगले कसरी अनुहारको छाला राम्रो बनाउन सकिन्छ आउनुहोस् कुरा गरौ । नुनमा एन्टीव्याक्टोरीयल र क्लीन्जीगं गुणहरु हुन्छन् । यसले गर्दा अनुहारको छालाका फोहोर तन्तुहरु हटाउने र व्याक्टोरीया वाट जोगाउने काम पनि नुनले गर्दछ है ।
गज्जबको कुरा त के छ भने हामीम्य धेरैजना डन्डीफोरको समस्याले तनावमा भएर धेरै अस्पताल र क्लीनीक धाएका छौ तर घरमै भएको नुनको प्रयोग गर्नाले सजिलै हाम्रो डन्डीफोर कसरी क मगर्न सकिन्छ त्यो पनि आज चर्चा गर्दछौ ।
एक चम्चा नुनमा थोरै पानी मिसाएर गाढा पेस्ट बनाउनुहोस् र त्यसै पेस्टले अनुहारमा बिस्तारै स्क्रब गर्नुभएमा छालाको गहिराईसम्म सफाई गर्दछ ।
गहिरो सफाई भएपछि अनुहारमा चमक आँउदछ र सुन्दर देखिन मद्धत गर्दछ । यसरी नुनको पेस्ट स्क्रब गरेको १० या १५ मिनेटमा अनुहारलाई सफा पानीले धुन पर्दछ । स्मरण रहोस् यदि अनुहारमा घाउ या कुनै चोटपटक छ भने यो विधी उक्त घाउ निको नभएसम्म प्रयोग नगर्नुहोला ।
नोट: “माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो। यी बिषयवस्तुहरु केवल जानकारीको लागी मात्र यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धि टिप्सहरु प्रयोग गर्नु भन्दा पहिला अनिवार्य रुपमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला
चिसो मौसम छ छाला एव् खुट्टाको कुर्कुच्चा फाट्ने समस्या आएको छ भने यसरी घरायसी उपचारबाट सफा र मुलायम बनाउन सकिने …
चिन्ताले गर्ने १२ हानि
दाँत दुख्नेदेखि हृदयघातसम्मको समस्याबाट छुटकारा पाउन प्रयोग गर्नुहोस् निम
किन हुन्छ पायल्स , कसरि बच्ने , के खाने के नखाने बिस्तृतमा जान्नुहोस्(शेयर गर्नुहोस्…
निरन्तर हाम्रो अनुहारमा हिड्ने यी किरा के हुन् -यसो भन्छ अध्ययन
कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ (यसो गर्नुहोस् )